शेयर बजारमा दोहोरो अंकको वृद्धि, कारोबार एक अर्बमाथि
काठमाडौं, पुस २२ : शेयर बजारमा मंगलबार होटल र उत्पादन तथा प्रशोधन उपसूचकबाहेक अरु सबै उपसूचकमा वृद्धि भएको छ। सर्वाधिक वृद्धि हुनेमा क्रमशः निर्जीवन बीमा, लघुवित्त, हाइड्रो र बैंकिङ समूह रहेको छ।
नेप्से परिसूचक १६ दशमलव २३ ले बढेर १२१६ दशमलव ९२ को विन्दुमा बन्द भएको छ। दोस्रो बजार १ दशमलव ३५ प्रतिशतले बढेको छ। १२०० दशमलव ६६ को विन्दुमा खुलेको दोस्रो बजार १२१८ दशमलव १५ को उच्च विन्दुसम्म पुगेको थियो।
बजार खुलेको विन्दु नै न्यून विन्दु १२०० दशमलव ६६ रहेको छ भने दिनभरमा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। कारोबार रकम पनि बढेको छ। बजार बढ्नु र कारोबार बढ्नुलाई लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढेको मानिन्छ।
आज सबैभन्दा धेरै माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको शेयर किनबेच भएको छ। माछापुच्छे« बैंक लिमिटेडको १९ करोड ४९ लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ।
आज सिभिल लघुवित्तका शेयरधनीले सर्वाधिक १० प्रतिशतले कमाए भने बोटलर्स नेपाल (तराई)का शेयरधनीले सर्वाधिक ३ दशमलव ९३ प्रतिशतले गुमाए।
अघिल्लो कारोबार दिनको निष्कर्ष अनुसार यदि बजार १२०० भन्दा माथि स्थिर रहेमा बजार अझ सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ। अर्को तत्कालीन प्रतिरोध १२१५ को क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ भनिएको थियो। आज बजार यही क्षेत्रमा रहेको छ र नेप्से परिसूचक १२१६ दशमलव ९२ को विन्दुमा बन्द भएको छ।
चित्र नं १ मा दैनिक मैनबत्ती विश्लेषण अनुसार हाल बजार बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ। तीन दिनको मैनबत्तीले ‘थ्री वाइट सोल्जर्स’ को आकृति बनाएको छ। यो आफँैमा बुलिस आकृति हो। यसले बजार केही सच्चिए पनि पुनः सकारात्मक हुन सक्ने संकेत गर्दछ। चित्र नं. १ मा देखिए बमोजिम हाल बजार प्रतिरोध क्षेत्र नजिक रहेको देखिन्छ। परिमाणले आजको मैनबत्तीलाई समर्थन गरेको छ।
चित्र नं. २ मा, दुई दिनको कारोबार कस्तो रह्यो भनेर हेर्नलाई पाँच मिनेट समयावधिको मैनबत्तीलाई प्रयोग गरिएको छ। समग्रमा हेर्दा बजार बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ।
आज २१ र ५० समयावधिको एक्सपोनेन्सियल मुभिङ्ग एभरेज (ईएमए)हरु फराकिलो भएकाले बजारमा क्रेताको चाप रहेको संकेत गरेको छ।
रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स (आरएसआई) ६८ दशमलव ७५ अंकमा रहेको छ। बजारको प्रवृत्तिसँग आरएसआईको प्रवृत्तिलाई तुलना गर्दा आरएसआई सामान्य रहेको छ। स्टोकास्टिक अक्सिलेटरले कारोबारको अन्तिम समयमा शेयर बढी खरिद भएको संकेत गरेको छ।
निष्कर्ष : छोटो समयावधिको बजारको प्रवृत्ति र सूचकलाई समग्रमा हेर्दा बजार सकारात्मक रहेको र बजारको तत्कालीन प्रतिरोध चित्र न. १ मा देखिए बमोजिम च्यानलको माथिल्लो प्रवृत्ति रेखामा रहेको देखिन्छ। अघिल्लो समयको १२०० को मुख्य प्रतिरोध हाल आएर मुख्य टेवामा परिणत भएको छ।
Published Date: Tuesday, 7th January 18:07:33 PM